Mauto akatevedzana Vagadziri & Suppliers - China Military akatevedzana Factory
Mvura Dura Kuchengetera Hydration Hiking Camping Cycling
Kusiyanisa dhizaini yeorenji uye yehuto girini izere nefashoni pfungwa.Magadzirirwo echifukidziro cheguruva chepfumbu yekukweva uye dhizaini yekusveta chubhu chivharo zvese zvinoratidza dhizaini yakadzama yebhegi remvura iri.Haina kungova nechitarisiko chinokwezva asiwo ine simba rinoshanda.
Hondo Yegirini Yemauto Yemhando Yemvura Bag
Bhegi remvura rine chitarisiko chemauto chegirini, uye chinewo hunhu hwemauto.Iko kushandiswa kweyepamusoro-yemhando yepamusoro inoshamwaridzana zvinhu firimu, hunyanzvi hwekuita, bhegi remvura haribvire, uye kutarisisa kune zvese kwese kwese, kukuunzira iwe ruzivo rwakanyanya.
Outdoor Sports Army Green Diki Kuvhura Chikafu Giredhi Mvura Bag
Iri bhegi remvura rakagadzirwa nezvinhu zvisina muchetura, zvisinganhuhwi, zvinoonekera uye zvakapfava.Inogona kuiswa mune chero gap rebhegi panguva yekukwira gomo, bhasikoro, uye kunze kwekufamba.Zviri nyore kuzadza mvura, zviri nyore kunwa, kusveta paunenge uchinwa, uye zviri nyore kutakura.Antibacterial material yakawedzerwa kubhegi remvura inogona kushandiswa kakawanda.Yakasununguka uye yakachengeteka.
Kunze Inotakurika Camouflage Mvura Bag
Camouflage yevarume, yakashongedzeka kamufire kutaridzika, mabasa ane simba.Zvinhu zvepamusoro-soro zvakatipoteredza, simba uye urefu hwepombi zvinogona kugadziriswa.Muviri webhegi haupfeki uye haukuvare nyore.Inokubvumira kukurumidza kuzadza zviwanikwa zvemvura.
BPA Yemahara Hydration Bladder Army Green
Hondo yegirini yekunze yemvura bhegi yemvura, yakanakisa diki yekuvhura dhizaini.High-frequency printing technology, matatu-dimensional mapatani.Yakanyatso gadzirwa suction nozzle dust cover.Kungokuunzira chiitiko chakanakisa.Tora nayo rwendo rwekunze.
Kambi Kukwira Kumhanya Hydration Bladder With Tube
Chibhegi chemvura chemhando yepamusoro chine kuvhurika kukuru.Shandisa yepamusoro inoshamwaridzana firimu uye zvishongedzo kubva kune inozivikanwa brand SBS.Uchishandisa tekinoroji yekudhinda skrini, kudhinda kwakajeka uye hakusi nyore kupera simba.Chigadzirwa chinoteerera kune zvese kwese kwese, kungokuunzira iwe yakanakisa mushandisi ruzivo.
Mauto Camouflage Waterproof Soft Cooler
Mauto emhando yecamouflage kunze multifunctional ice pack.Huru hwemagaba makumi maviri nematanhatu.900D-TPU yepamusoro-mhando zvinhu.Nzira dzakasiyana-siyana dzekutakura.Isingapindi mvura uye inopisa kupisa, yakashongedzwa uye inotakurika, yakakodzera kune akasiyana mamiriro.Kembi, pikiniki, barbecue, mota, nezvimwe, zvine mabasa akasiyana.
Plastic Mazino Zipper Mvura Inotonhorera Inotonhorera
Makumi makumi maviri emagaba anotakurika TPU yakapfava inotonhorera bhegi, uchishandisa yepamusoro-mhando rabha mazino zipper, yepamusoro-giredhi isingapinde mvura, kuchengetedza chikafu kweanosvika maawa makumi manomwe nemaviri.Inogona kushandiswa kutakura chikafu chegungwa, michero, zvinwiwa uye mishonga.Tamba basa rakakura mumapikiniki, kukwira makomo, kumisasa uye zvimwe zviitiko.